Apple Warranty ကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနည်း | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Apple အာမခံကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနည်း
Eder Ferreno | | မက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
စပိန်တွင် သန်းနှင့်ချီသော သုံးစွဲသူများသည် Apple ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိသည်။ ဥပမာ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် Mac ဖြစ်ပါစေ။ သင့်တွင် ဤထုတ်ကုန်များရှိပါက၊ ၎င်းတို့သည် စျေးကြီးသောစက်ပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့် အာမခံချက်ရှိမရှိသိရှိခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မည်သည့် Apple ထုတ်ကုန်၏အာမခံချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဤအာမခံချက်သည် တရားဝင်သေးသလား မသေချာပါက သုံးစွဲသူများအတွက် အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။
ကံကောင်းတာက Apple ၏အာမခံချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောအရာဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်မှ ဝယ်ယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၎င်း၏အာမခံချက်ကို သင်စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရက်စွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယများရှိနေပါက ၎င်းသည် တရားဝင်နေသေးသလား မသိပါက နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အာမခံချက်သည် ထုတ်ကုန်အသစ်တွင်ရော အနည်းငယ်ဟောင်းနေပြီဖြစ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုတွင်ပါ အလွန်အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ပြုပြင်မှုတစ်ခုရနိုင်ဆဲရှိမရှိကို သိရှိခြင်းသည် Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအာမခံချက်သည် သင့်ထုတ်ကုန်များ၏ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို အချိန်တိုင်းစစ်ဆေးရန် ကောင်းပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီစက်နဲ့ လိုက်လုပ်ရမယ့် အဆင့်က ဘာလဲဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။
1 Apple စက်ပစ္စည်း၏အာမခံချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
1.1 အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ရယူပါ။
2 ဒါကြောင့် Apple မှာ အာမခံကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
3 Apple တွင် အာမခံသက်တမ်းတိုးပါ။
3.1 AppleCare ပံ့ပိုးမှု
Apple သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများစွာ ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခု၏အာမခံချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါတို့ဝယ်ပြီးပြီ။ ကုမ္ပဏီတွင် ဤအချက်အလက်များကို အချိန်တိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်က စက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာမည်ဖြစ်သောကြောင့် အထူးသဖြင့် မြန်ဆန်ခြင်းအတွက် ထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင်၊ အာမခံကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိရန်ဤကိစ္စတွင်ဒေတာအများကြီးမလိုအပ်ပါ။
ဤထုတ်ကုန်၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို သိရန် လိုအပ်သည်။ မည်သူ့အာမခံချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိုသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်သည်။ ၎င်းသည် အာမခံအောက်တွင် ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးလိုသည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုမည့် တစ်ခုတည်းသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဒေတာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိုအချိန်တွင် သင့်တွင်ရှိသော AppleCare (သင့်စက်ပစ္စည်းများအတွက် လက်မှတ်အာမခံ) အခြေအနေကို ကျွန်ုပ်တို့အား မြင်တွေ့နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ သံသယကင်းရှင်းဖို့ လွယ်နိုင်မယ်။
မေးခွန်းထုတ်သည့် စက်၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုသာ လိုအပ်သည်၊ iPhone၊ Mac သို့မဟုတ် iPad ဖြစ်ပါစေ။. ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများတွင် မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်မည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် ဤကိစ္စရပ်တွင် သင်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်ကိုက်ညီမည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရှိသင့်သည်။ သုံးစွဲသူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ Apple စက်များ၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို မည်သို့ရယူရမည်ကို မသိကြပါ။ ဤအရာများသည် လက်ရှိပြုလုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်-
ကုန်ပစ္စည်းသေတ္တာ: Apple သည် အများအားဖြင့် ၎င်း၏ စက်ပစ္စည်းများ၏ သေတ္တာများပေါ်တွင် အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ထားလေ့ရှိသည်။ သင့်တွင် သင်၏ iPhone၊ iPad၊ Mac သို့မဟုတ် AirPods ကဲ့သို့သော နားကြပ်များအတွက် သေတ္တာရှိနေသေးပါက၊ ထိုသေတ္တာ၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ၎င်းသည် ဤထုတ်ကုန်၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ညွှန်ပြထားသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ နောင်တွင် ရနိုင်စေရန် ၎င်းကို ချရေးရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
လက်မှတ်ဝယ်ပါ။: သင် မကြာသေးမီက ဝယ်ယူခဲ့သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါက၊ သင့်တွင် ဝယ်ယူမှုပြေစာ ရှိသည်မှာ သေချာပါသည်။ ဝယ်ယူမှုပြေစာတွင် Apple စက်ပစ္စည်းများ၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤဒေတာကို ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့် အသုံးပြုခွင့်ရစေမည့်အရာဖြစ်သော်လည်း ၎င်းအတွက် လက်မှတ်ကို သင်သိမ်းဆည်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
စက်ပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။: Apple စက်များတွင် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ပေါင်းစပ်ကဏ္ဍတစ်ခု ရှိသည်။ ဤသည်မှာ "အကြောင်း" အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေတာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ၎င်း၏နံပါတ်စဉ်ကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အာမခံချက်ကို ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဤအချက်အလက်များရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
ဒီနည်းလမ်းသုံးမျိုးထဲက တစ်ခုခုက သင့် Apple စက်မှာ အဲဒီ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို မြင်နိုင်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် သင့်တွင် ထုတ်ကုန်သေတ္တာရှိနေသေးသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ထိုအချိန်တွင် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို အသုံးပြုပါ။ လက်မှတ်ကိရိယာများပေါ်ရှိ အမှတ်စဉ်နံပါတ် ဂဏန်းများနှင့် စာလုံးများ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ဒါမှ အချိန်တိုင်း အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်မှာပါ။ ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင်၊ ၎င်းသည် မေးခွန်းထုတ်သည့် ထုတ်ကုန်၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ဘေးတွင် ညွှန်ပြထားသည်။
ဒါကြောင့် Apple မှာ အာမခံကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ရရှိပြီးသည်နှင့်၊ Apple မှာ ဒီအာမခံချက်ကို စစ်ဆေးဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။. သင်တော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ၊ Cupertino ကုမ္ပဏီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းသည် အာမခံချက်ရှိ၊ မရှိကို အချိန်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုစက်ပစ္စည်းအား အာမခံချက်ရှိမရှိ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လိုက်နာရမည့်အဆင့်များသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း စတင်သောအခါတွင် သင့်တွင် အဆိုပါ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သံသယစိတ်ကင်းရှင်းချင်သည့်တိုင် သင်ရှာဖွေရန်လိုသည်မဟုတ်ပါ။ Apple ၏အာမခံချက်ကိုစစ်ဆေးရန် သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဒီလင့်ကိုသွားပါ။ ထုတ်ကုန်အာမခံစမ်းသပ်မှုအတွက် Apple ဝဘ်ဆိုက်တွင်။
၎င်းကိစ္စတွင် သင်စစ်ဆေးလိုသော စက်၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပါ။
သင်တောင်းဆိုထားသည့် captcha ကိုထည့်ပါ။
Apple သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို သင့်အားပြသရန် စောင့်ပါ။
သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ဤအဆင့်များကို ပြီးမြောက်သောအခါ၊ Apple သည် သင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ AppleCare လွှမ်းခြုံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကဏ္ဍများကို သင့်အား ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာက ဒီမှာ အားလုံးမြင်နိုင်မယ်။ အာမခံနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်များ သင့်ထုတ်ကုန်၏မေးခွန်း။ ကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် တောင်းဆိုလိုပါက၊ သင်သည် သင်၏ iPad သို့မဟုတ် Mac တွင် ပြဿနာရှိ၍ ပြုပြင်ပေးမည့် အာမခံချက်အောက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လင့်ခ်များကို ကုမ္ပဏီက ညွှန်ပေးပါသည်။ သင့်ကိစ္စတွင် တစ်စုံတစ်ရာ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤစာမျက်နှာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံသက်တမ်းကုန်သွားခြင်းရှိမရှိ လျင်မြန်စွာသိနိုင်ပါသည်။. ဤသည်မှာ Apple စက်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးပြုသူများစွာ၏ မေးခွန်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ဝယ်ယူခဲ့သည့်နေရာပေါ်မူတည်၍ အာမခံကာလ မတူညီနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဤစနစ်ကို အချိန်တိုင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤအာမခံချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများကို ဖယ်ရှားရန် ကောင်းပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် မြန်ဆန်သည့်အရာဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မြင်သာထင်သာရှိပြီး လိုက်နာရလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Apple တွင် အာမခံသက်တမ်းတိုးပါ။
ဤကဏ္ဍများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple စက်ပစ္စည်းများ၏ အာမခံချက်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ အာမခံသက်တမ်းသည် သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေသည့်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ AppleCare တွင် ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုအာမခံချက်ကို သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် အစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူပါ။ ထုတ်ကုန်၏ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာသောအခါတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုရှိသည်။ အထူးသဖြင့် သင့်လက်ရှိစက်ပစ္စည်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်ကို ရယူလိုလျှင် ၎င်းသည် လက်မှတ်ပါစက်များရှိသည့် သုံးစွဲသူများစွာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
AppleCare သည် Cupertino ကုမ္ပဏီ၏ ပြုပြင်မှု၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုကို အမြဲဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အတွက် အထူးအစီအစဥ်တစ်ခုကို ဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်အရာဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အမြဲတမ်းမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး မည်သည့်ပြုပြင်မှုအတွက်မဆို ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ AppleCare အတွင်းရှိ ပရိုဂရမ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှရရှိသည့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းများအတွက်မဆို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်ကာကွယ်လိုသော စက်ပစ္စည်းအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ သင့်ကိစ္စတွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ရနိုင်သည်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အားလုံး AppleCare ပံ့ပိုးမှုရှိသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည် ၎င်းတို့အားလုံးအတွက် သင်အလိုရှိတိုင်း ၎င်းတို့အားလုံးအတွက် အပိုအကာအကွယ်အစီအစဉ်တစ်ခုကို ငှားရမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည် စပိန်တွင် လောလောဆယ်တွင် နောက်ထပ်အာမခံအစီအစဉ်တစ်ခုအား Apple မှ စာချုပ်ချုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်-
Dre ၏ စည်းချက်
၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သင်သည် ထိုထုတ်ကုန်ကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်တွင် သင်၏ Apple အကောင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ သင်ရရှိနိုင်သည့် မတူညီသော အစီအစဉ်များကို သင်ပြသပါလိမ့်မည်။ သင့်ကိစ္စတွင်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောစက်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏အသက်အရွယ်နှင့် သင်သည် ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဖောက်သည်ဖြစ်လျှင်။ AppleCare တွင် ၎င်းအသုံးပြုသူလိုအပ်မည့်အရာများနှင့် ကိုက်ညီမည့် အစီအစဉ်များကို AppleCare တွင် အမြဲတမ်းရှိစေရန်အတွက် အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ အစီအစဉ်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါသည်။ သင်လိုချင်သည့်အရာနှင့် ကိုက်ညီမည့် အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါက၊ ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်တွင် တည်ထောင်ထားသည့်အချိန်အတွင်းတွင် သင်သည် ၎င်းကို အပိုအကာအကွယ်နှင့် အာမခံချက်ရှိစေရန် ၎င်းကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်မှုတွေ အခမဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင်သိပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Apple အာမခံကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနည်း
Instagram ဇာတ်လမ်းများကို အကြိုကြည့်ရှုနည်း
Candy Crush အဆင့်များကို သော့ဖွင့်နည်း